EUROPA LAEGUE: Feyenoord oo garaacday Man United iyo natiijooyinka kale ee kulamadii laciyaaray +SAWIRRO – Gool FM
EUROPA LAEGUE: Feyenoord oo garaacday Man United iyo natiijooyinka kale ee kulamadii laciyaaray +SAWIRRO
Liibaan Fantastic September 15, 2016
(Feyenoord) 15 Sebt 2016 Kooxda Feyenoord ayaa guul daro dhabarka u saarisay kooxda Man United kulan ka tirsanaa wareega guruubyada ee koobka Europa League, waana guul daradii labaad ee isbuuc gudihiis soo gaarta kooxda macalin Mourinho.
Ciyaartoyda kooxda Feyenoord oo u muuqday kuwo ka faa’idaysanaya garoonkooda oo ay ka dhacaysay ciyaarta ayaa ku soo galay fag fag daran taas oo ka yaabisay wiilasha tababare Mourinho.
Labada koox ayaa iska khasaariyay dhawr fursadood oo ay isku heleen qaybtii hore ee ciyaarta, taas oo keentay in lagu kala nasto 0-0.
Qaybtii dambe ciyaartoyda Feyenoord ayaa halkooda ka siiwaday kubad haysigooda iyaga oo kubaddo halis ah ku abuuray goolka kooxda Man United.
79 daqiiqo Tonny Vilhena ayaa gool uga naxsaday kooxda United kadib markii uu shuud xoogan daba mariyay goolhaye De Gea, wuxuuna ka caawiyay kooxdiisa Feyenoord inay hogaanka ku qabato 1-0.
United ayaa isku dayday inay soo barbarayso ciyaarta laakiin uma suuro galin, Feyenoord ayaana ku adkaatay ugu danbayntii 1-0.
Kulamada Kale ee laciyaaray koobka Europa League:
Kooxaha Zorya iyo Fenerbahce ayaa ku kalabaxay 1-1 kulan ka tirsanaa guruub A, APOEL ayaa 2-1 uga adkaatay kooxda Astana halka Olympiakos ay 1-0 ku dubatay kooxda Young Boys kulan ka tirsanaa guruub B.
Guruub C, Anderlecht ayaa 3-1 ku garaacday kooxda FK Qabala halka Mainz ay barbaro 1-1 ah lagashay kooxda Saint-Etienne.
Guruub D, AZ Alkmaar ayaa barbaro 1-1 ah la dhaafiwaysay kooxda Dundalk, Zenit St. Petersburg ayaa guul dirqi ah ka gaartay kooxda yuhuuda ee Maccabi Tel Aviv kadib markii ay uga adkaatay 4-3.
Guruub E, Austria Wien ayaa 3-2 uga adkaatay kooxda Astra Giurgiu, dhanka kale Roma ayaa 1-1 la dhaafiwaysay kooxda Viktoria Plzen.
Laacibkii hore ee Liverpool Ryan Babel oo ku biiray Deportivo
Muxuu ka yiri Mourinho guul daradii ka soo gaartay caawa kooxda Feyenoord?